Published April 20, 2021 at 6:08 AM CDT
South Dakota waa mid kamid ah gobolada ugu sareeya wadanka boqolleyda dadka qaatay ugu yaraan hal qiyaas oo tallaalka ah. Hadda saraakiisha caafimaadka waxay diiradooda u weecinayaan kuwa ka labalabeynaya in la tallaalo. Daraasad lala sameeyay dadka deggan bartamaha Koonfurta Dakota waxay muujineysaa in 30% ay ka cago jugleeyeen tallaalka.
Shirkad caymis oo ka tirsan Magaalada Cedar Rapids ayaa siin doonta $ 8 milyan darawal madow oo curyaan ah ka dib markii sarkaal boolis cadaan ah toogtay isaga oo ku sugan taraafikada 2016.
Lacag bixinta ayaa lagu xalin doonaa dacwad mudo dheer socotay oo uu keenay Jerime (Jeremy) Mitchell oo ku saabsan toogasho soo bandhigtay xiisadaha u dhexeeya dadka degan Madowga iyo maamulka magaalada labaad ee ugu weyn Iowa.
Jones ayaa la ceyriyay xagaagii la soo dhaafay ka dib markii baaritaan gudaha ah lagu ogaaday inuu ku xadgudbay siyaasadaha waaxda.
Shirkii ugu horreeyay abid ee Ganacsi Madoow iyo bunni waxaa qabta rugta West Des Moines toddobaadkan.
Munaasabadan ayaa soo bandhigi doonta ganacsiyada yaryar ee laga tirada badan yahay ee gobolka waxayna siin doontaa fursado isku xirnaanta ganacsiyadaas inay sii wadaan inay koraan.
Qabanqaabiyeyaashu waxay rajeynayaan inay ka dhigaan munaasabaddan sanadle ah.
Iyo mid ka mid ah goobaha muusikada ugu weyn ee Sioux City ayaa ku dhawaaqday qorshayaal dib loogu bilaabayo madadaalada tooska ah.
Heesta 'Hard Rock Hotel' iyo 'Casino' ayaa loo qorsheeyay seddex bandhig bishii Juun iyo midna bisha Luulyo.
Tallaabooyinka nabadgelyada ee COVID-19 ayaa lala socon doonaa ka-qaybgalayaasha oo lagu dhiirrigelinayo inay xirtaan waji-furka. Iyagu amar looma siin doono.
Waaxda Caafimaadka Bulshada ee Iowa waxay ka warbixineysaa 13 dhimasho dheeraad ah oo COVID-19 ah iyo 468 kiis oo dheeri ah oo la xaqiijiyey. Degmada…